Ity ny fomba hanatsarana ny blôginao amin'ny marketing amin'ny atiny | Martech Zone
Ity ny fomba hanatsarana ny bilaoginao amin'ny marketing amin'ny atiny
Alakamisy, Jolay 24, 2014 Kelsey Cox
Na inona na inona karazana atiny noforoninao, ny bilaoginao no tokony ho ivon'ny marketing amin'ny atiny rehetra. Fa ahoana no ahazoanao antoka fa napetraka ny rafi-pitabatabana afovoany mba hahombiazany? Soa ihany, misy fika tsotra sasany izay hampitombo ny fizarana ary hiantoka ny fahafantaran'ny mpanaraka anao izay tokony hataony manaraka.
Azo antoka izao ny milaza fa ny olona dia tia sary. Raha ny marina, lahatsoratra iray misy sary dia mihoatra ny 2x kokoa noho ny lahatsoratra tsy misy. Arakaraka ny maha-mahafinaritra ny maso ny bilaoginao no azo inoana fa hizarana azy. Hamarino tsara fa ny bokotra fizaranao ara-tsosialy mifandraika indrindra dia apetraka eo am-piandohan'ny lahatsoratra tsirairay ary ho hitanao ny fanonona 7x bebe kokoa.
Ao amin'ny bokin-tsary etsy ambany, Tsanganana fahadimy ary Amin'ny sambo zarao ny toro-hevitra vitsivitsy momba ny fomba hahazoana antoka fa manatsara ny bilaoginao ary vonona ho an'ny mpitsidika, mizara ary fiovam-pony. Raha te hianatra bebe kokoa momba ireo fantsona fizarana tsara indrindra ho an'ny atiny ianao, ny fomba hanatsarana ny fantsona tsirairay hahazoana valiny lehibe indrindra, mahazoa fametrahana media ary refesio ny ROI - azonao atao ny misintona Ny torolàlana farany ho an'ny fizarana atiny.
Ampahafantaro anay ny zavatra hafa ataonao hisarika ny mpamaky amin'ny bilaoginao etsy ambany amin'ny fanehoan-kevitra.
Tags: bilaogyContent MarketingctaSary torohay-barotraOptimizationROISEOhaino aman-jery sosialyporofo ara-tsosialy
Vidio ny toeranao: fampiharana finday namboarina namboarina ho an'ny mpanjifa
Aug 6, 2014 amin'ny 3: 21 AM
Salama, mamorona bilaogy amin'ny WordPress aho ary ity lahatsoratra ity dia manampy ahy hanatsara azy. Mihoatra ny atiny izay manazava betsaka ny sary. Mazava amiko izao ny tokony ho endrik'ilay bilaogy. Misaotra tamin'ny lahatsoratra.
Aug 26, 2014 amin'ny 8: 08 AM
Saingy ny atiny dia tokony misy ifandraisany amin'ny zon'ny bilaogy raha tsy misy ifandraisany dia mety hampiasaina ny fifamoivoizana tsy misy dikany.
Oct 14, 2014 amin'ny 1: 27 AM
misaotra amin'ny lahatsoratra… mino aho fa manampy ahy hanatsara ny bilaogiko ity lahatsoratra ity